Atemmufo 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
14 Na Samson kɔɔ Timna+ kohuu Filistifo mmabea no biako wɔ hɔ. 2 Enti ɔka kyerɛɛ ne papa ne ne maame sɛ: “Mahu Filistini ababaa bi wɔ Timna, na mepɛ sɛ mukogye no aware ma me.”+ 3 Na ne papa ne ne maame bisaa no sɛ: “Woanhu ɔbea biara wɔ wo nuanom ne me nkurɔfo nyinaa mu+ a enti wopɛ sɛ wokɔware ɔbea fi Filistifo momonotofo yi mu?”+ Nanso Samson ka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Ɔno ara na m’ani gye ne ho, enti kogye no ma me.” 4 Ná ne papa ne ne maame nnim sɛ Yehowa nsa wom,+ efisɛ na ɔrehwehwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so anya Filistifo no. Saa bere no na Filistifo di Israel so.+ 5 Enti Samson ne ne papa ne ne maame siim kɔɔ Timna. Na bere a oduu Timna+ bobe nturo mu no, ɔbɛhwɛ a, gyata bi na ɔrebobom ba ne so yi! 6 Ɛnna Yehowa honhom baa no so,+ na ɔwaee aboa no mu abien sɛnea obi wae ɔpapo kumaa mu, nanso na onkura biribiara wɔ ne nsam. Na wammɔ nea ɔyɛe no so ankyerɛ ne papa anaa ne maame. 7 Na ɔtoaa so kɔɔ n’anim ne ɔbea no kɔkasae, na Samson hui sɛ ɔbea no da so ara sɔ n’ani.+ 8 Bere bi akyi no, ɔkɔe sɛ ɔrekɔfa ɔbea no aba fie.+ Na ɔman kɔhwɛɛ gyata funu no, na ohui sɛ nnowa ne ɛwo+ ahyɛ mu mã. 9 Enti oyii bi kuraa ne nsam, na ɔrekɔ nyinaa na ɔredi.+ Bere a ɔkɔtoo ne papa ne ne maame no, ɔmaa wɔn bi dii. Nanso wanka ankyerɛ wɔn sɛ gyata no funu mu na oyii ɛwo no. 10 Na ne papa toaa so kɔɔ ɔbea no nkyɛn, na Samson tow pon wɔ hɔ,+ efisɛ saa na na mmerante no taa yɛ. 11 Bere a wohuu no no, wɔde mmarima aduasa brɛɛ no sɛ ayeforokunu nnamfo a wɔbɛtena ne ho. 12 Afei Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mewɔ aborɔme bi a mepɛ sɛ mokyerɛ me ase.+ Sɛ mutumi kyerɛ ase ansa na apontow yi aba awiei nnanson+ akyi a, mɛma mo atade nhyɛase aduasa ne nguguso+ nso aduasa. 13 Na sɛ moantumi ankyerɛ me ase a, ɛnde mobɛma me atade nhyɛase aduasa ne nguguso nso aduasa.” Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “To w’aborɔme no na yentie.” 14 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ:“Odidifo mu+ na wonyaa biribi a wodi,Na ɔhoɔdenfo mu na wonyaa ade fremfrem.”+ Na wɔtenaa ho nnansa a wɔantumi ankyerɛ ase. 15 Afei da a ɛto so anan no, wɔka kyerɛɛ Samson yere sɛ: “Daadaa wo kunu na ɔnkyerɛ yɛn aborɔme no ase.+ Anyɛ saa a, yɛbɛhyew wo ne wo papa fie nyinaa.+ Adɛn, mode yɛn baa ha sɛ morebɛpra yɛn ho nneɛma+ anaa?” 16 Enti Samson yere su guu no so+ sɛ: “Mahu sɛ ɔtan na wotan me, na wonnɔ me koraa.+ Woato me nkurɔfo aborɔme,+ nanso wonka nkyerɛɛ me.” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, me papa ne me maame mpo menka nkyerɛɛ wɔn,+ na wo na menka nkyerɛ wo?” 17 Na osu guu ne so nnanson a apontow no gu so no nyinaa. Afei da a ɛto so ason no, ɔka kyerɛɛ no efisɛ na ɔreteetee no.+ Na ɔbea no nso ka kyerɛɛ ne nkurɔfo.+ 18 Enti da a ɛto so ason, ansa na ɔbɛkɔ ɔbea no pia mu+ no, kurom hɔ mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ:“Dɛn na ɛyɛ fremfrem sen ɛwo?Na dɛn na ɛwɔ ahoɔden sen gyata?”+Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ:“Sɛ moamfa me nantwi amfɛtɛw a,+Anka muntumi nkyerɛ m’aborɔme yi ase.”+ 19 Na Yehowa honhom baa no so,+ na ɔkɔɔ Askelon+ kokunkum wɔn mmarima aduasa, na oyii wɔn ntade maa wɔn a wɔkyerɛɛ aborɔme no ase no.+ Na ɔde abufuw kɔɔ ne papa fie. 20 Na wɔde Samson yere+ no maa ne yɔnko+ bi a na ɔka ne ho sɛ ayeforokunu adamfo.